အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: November 2007
သေတနေ့ ၊ မွေးတနေ့ 
အများအတွက် သက်စွန့် ၍
ဘယ်တော့ သေရိုးထုံးစံ မရှိ၊
တကယ် စိတ်ချ ယုံကြည်စွာ။
ကမ်းလက်လှမ်းခဲ့ ။ ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီ။
ဒါ မြန်မာမှ ဟုတ်၏ လော။
ဖမ်းသည်မရွံ့ ။ နောက်မတွန့် ။
မနုဿ အသေခံ တံတိုင်းရဲ့ လူသား။
ကျွန်တော်နံမည် ဘယ်စာရင်း မရှိ။
ကျွန်တော်ဘယ်သူ ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိ။
သပိတ်တန်း ၏ အပြင်စည်းက ကျွန်တော်
အမေနဲ့ကျွန်တော်ဘဲသိသည့်။
သား တိုင်းပြည်အတွက်.အသက် စတေးခဲ့ပြီ။
အာဇာနည် မောင်ကိုကိုဝင်းအတွက်..ဂုဏ်ယူခြင်းများစွာဖြင့် 
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:36 PM0comments
စိမ်ခေါ်တယ်၊ မီဒီယာတိုက်ပွဲ။ ဒို့ တတွေ၊ သွေးမကြဲ။
ဒီနေရာကဘဲ သူ့ ပင်လယ်၊
မာန်ဖီ ဟိန်းဟောက် အမြီးတထောင်ထောင်။
တောင်ပြေးမြောက်ပြေး၊ ဟောင်တဲ့ ခွေး။
တပါးသူ ပြည့်စုံလှပ၊ ကြည့်မရ၀န်တို၊
မရှိတာက သူ့ အမြီး။
ခူးမမှီ လို့ သူ ညည်း၊
မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်
ဟား၊ ဟား၊ ဟား၊
အမှန်ဆိုတာ ဖုံးမရ၊ ဖိမရ
တနေ့ နေ့ ကျကြွေ။
သင်ပုန်းချေလို့ ၊ ရစကောင်းလား။
သွားတစ်ချောင်း ချင်းဆို တစ်ချောင်း၊
သွေးနဲ့ မဆေးသမျှ၊ ဘယ်မအေး။
အားလုံးဟာ၊ သာကီနွားများ နောက်လိုက်၊
ဒို့ နိုင်မှ .ဒို့ ဘက်လာဦးမတိုက်နဲ့ ။
မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ အချိန်ပေးသူများ။
အရည်အချင်းရော တူလို့ လား။
စဉ်းစားကြည့်.. ဒီ မီဒီယာတိုက်ပွဲ
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:39 PM0comments
တပါး သေမှ အစာဝ၊
နေ့ စဉ် ဆုတောင်းပေး။
ကြံ့ခိုင်၊ ဖွံ့ ဖြိုးမှုဆိုတာ နတ္တိ။
သိတာက၊ ငါ ဟဲ့အတ္တ။
ခွေးစားသွား၊ အဆန်မဲ့ ခေါင်းခွံဘဲရှိ။
ဘ၀က ရှင်ရက်နဲ့ သေ။
ဘုရား မရှိ ၊ တရား မသိ၊
ဘယ်သူ ငါမသိ၊ နင့်အသက်သာတွက်၊
ပထွေးမှာတာဘဲ မျက်နှာလုပ် ဖား၊
ဒါ ဗမာပြည်က လူရမ်းကား။
အရှက်မဲ့ ကြံ့ဖွံ့ နဲ့ စွမ်းအားရှင်များ။
ပျင်းရိငတ်ပြတ်၊ လူတတ်ကြီး လည်းလုပ်ချင်။
လူကောင်းတွေထဲ တိုးပေါက် မ၀င်
မာန်နတ် စစ်စာရင်းထဲ အတင်းဝင်။
ခု ခေတ်ပျက်စဉ်။ ကြံ့ဖွတ်ထဲမှာ သူစိုးမိုး။
မွေးရာပါကံ နုံနည်း။ မိုက်မဲနာ စွဲ။
ပညာဆိုတာ သူများခိုးစရာတောင် မရှိ၊
မတရား၊ တရား၊ ငွေရဖို့ ပဲ သိတဲ့လူ၊
လက်ထောက်ချ အခါပေး၊ အချက်ပြရဲသူ။
ဆင်ဖြူရေချ၊ တပေါင်းလ နဲ့ 
မတော်မတရား၊ သာသနာ့မြေပေါ် အပြာကား
ကြွေးသစ် ထပ်ထပ် သာယူ.
မင်းဘ၀ ငရဲထဲ ပြာပူ။
သေရင် ဘယ်တော့မှ လူပြန်မဖြစ်
အနှစ်တသောင်း ငရဲမှာ ခံရစ်။
အင်း။ မင်း ကြံ့ဖွတ်ဖြစ်ချင်ဦးလေ။
ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်း လိုက်မဲ့ ဗမာနိုင်ငံ
ပြိုကျပျက် စာရိတ္တ မဏ္ဍိုင်၊
ပြန်တိုင်ထူကြ ဖို့ ။
ကြံ့ဖွတ်တွေကို တွန်းလှန်ကြစို့ ။
စွမ်းအားရှင်ကို အပြုတ်နှံကြစို့ ။
ထောက်ပန့် နေတဲ့ ဒီ ကျောရိုးတိုင်
အဆုံးတိုင်၊ နိဂုံးချုပ်နိုင်ဖို့ 
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:38 AM 1 comments
စင်ပြိုင်ရှင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်ရင်း၊ ရင်ဆိုင်ခြင်း။
ကဗျာဆရာမလို့ ပြောဖို့ ကျ
ကျမ ဒီလောက်ကြီး မတော်လှ
ဘာမှန်းမသိရတဲ့ ဇော်ကန့် လန့် 
ကာရံ မမိဘဲ၊ မဆံ့တငံ့.
စေတနာ က အရင်းမှန်
စင်ပြိုင်အစိုးရ ဘ၀၊ မမှန်းရသော်ညား.
ကျမရဲ့ မှန်ရာ၊ မိုးကြိုးသွားစကား။
နည်းနည်းကလေးဘဲ၊ တချက် နှစ်ချက်
မသဒ္ဓါ (၁၁။ ၂၅။၂၀၀၇)
ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်ဟာ စင်ပြိုင်အစိုးရ တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ (အောင်ဝေး) ကိုကိုးကား၍ ဂုဏ်ယူစွာ ထည့်သုံးစွဲထားပါသည်။ မသဒ္ဓါသည် ကဗျာဆရာမ ဖြစ်ချင်လှပါသော်လည်း.ဘ၀ပေး ကုသိုလ်မကောင်း၍ လက်တွေ့ ကျသိပ္ပံပညာရှင် ဖြစ်ခဲ့ရပြီး မြန်မာစာသမားစစ်စစ်ကဲ့သို့ ကဗျာနည်းနိဿရများလေ့လာခွင့် နည်း ပါးခဲ့ရပါသည်။ ၀ါသနာအလျောက် ကဗျာရေးပြီး ကဗျာရေးရာတွင်ကိုယ်အရည်အချင်းမပြည့်ကြောင်းဝန်ခံ ထား ပါသည်။
ဆရာအောင်ဝေး၏ စကားကြားမှသာ တော်တော်လည်း.ကဗျာဆရာတွေ စွမ်းရည်တယ်ဟုတ်ပါလား ဟုဘ၀င် ပင်လေဟပ်သွားပါသေး၏။ ဒါပေမဲ့မသဒ္ဓါ၏ အရည်အချင်းမှာဆရာ့လောက်မရှိတော့သက်ဆိုင်တဲ့အဖိုးကြီး တွေ ဖတ်ပြီး ကသ်ိကအောင့်လေး နည်းနည်းပါးပါးလေးဖြစ်အောင် လုပ်နိ်ူင်ရင်ဘဲမသဒ္ဓါ ကျေနပ်လှပါပြီ။ ဤစကား အတွက် အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆရာ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 11:50 PM 1 comments
ဒါးမြကြီးနဲ့သူခိုးလက်ခံ ရွာများ. ( စစ်အာဏာရှင်နဲ့ အာစီယံ )
“ သုခဂါမ” အမည်နဲ့ရွာသာယာ..
ချမ်းမြေ့ရိပ်မြုံ ရွာအလှ .ပသာဒ။
တရွာလုံး ညီညာ၊ ပျော်ရွှင်ကြည်နူး။
ရွာဦးဆီ ထုံးဖြူဖြူ နဲ့စေတီ
ကြာမျိုးငါးမည်နဲ့ ရေကန် ပြာပြာ၊
သာယာတဲ.့ ဘုံကုသိုလ် နဲ့ သရက်ဥယျာဉ်
တနေ့ မှာ ရွာကို ဒါးမြတက်၊
ဆိုးဒါးပြဗိုလ်ကြီး၊ သူနံမည်က. ဦးညာဖြီး။
ဒါးပြ ပြီးမိုက်။ ရှိသမျှ ရွာက ဘဏ္ဍာနှိုက်
စိမ်းညို့ ညို့ ၊ သရက်ပင်တော။
ရသမျှ၊ မရ ဒဿက ချိုင်။
သူ့ ဒါးကြီး ပြပြပြီး။
အရှေ့ ရွာ၊ အနောက်ရွာ…ရှိသမျှလည်ရောင်း၊
ပေါချောင်ကောင်းနဲ့မတန်တရာဈေး ။
ဈေးတွက်တွေးတဲ့၊ အနီးနားက ရွာ
ဒို့ ရွာသားတွေ၊ ငတ်ပြတ်ပိန်လှီကပ်။
စပါးမရှိ တဲ့ စပါးကျီ။
အရွက်ကြဲကြဲ နဲ့ သရက်ဥယျာဉ်
ဒိဋ္ဌိတပိုင်း နဲ့ဒါးမြများ။
သံဃာတု တဲ့၊ ခွေးပါးစပ် နတ်စကား
သူတို့ ကတော့ ဒါးမြသက်သက်။
အထောက်တော်လာ တဲ့ ထိုတခဏ၊
ငစဉ်းလဲ သာ။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထောက်
အရှေ့ ရွာ၊ တောင်ရွာ
လည်ပြီးသာ၊ လာဘ် ပဏ္ဍာပို့ 
ဒီသူကြီး ကောင်းကြောင်းထောက်ခံဖို့ ။
ရွာသာယာ ထွက်ဆန်စား၊.အရှေ့ ရွာသား။
အရှေ့ ရွာမှာ ဆန်မထွက်၊
ဘယ်သူသေသေ..ဒို့ မသေဖို့ အရေးကြီး
“ဒို့ က ဦးညာဖြီးမှ.. ဦးညာဖြီး..”
ထင်းမရှိရှားပါး၊ တောင်ဖက် ရွာသား၊
ကြိ်ုက်ကြိုက်၊ မကြိုက် ကြိုက်
ဒို့ လည်းလေ. “ဒီသူကြီး" ဘဲကြိုက်
ဒီ သူကြီးကိုတော့ သိပ်မကြိုက်
သူ့ ဖယောင်းတိုင်မရှိက..ဒို့ ရွာအမှောင်တိုက်
ဟေ့ ကျုပ်တို့ လည်း.."သူ" ဖို့့မဲ။
ဒီသုခရွာ က အရှုပ်..
သူကြီးလုပ်ကြေး၊ ဒါးပြပြီး မမိုက်ကြရေး.
မသဒ္ဓါ။ (၁၁။ ၂၅။၂၀၀၇)
မင်းဗြဟ္မဒတ် = UN အဖွဲ့ အစည်း။
“ သုခဂါမ” = မြန်မာပြည်။
ဦးညာဖြီး = စစ်အာဏာရှင်ကြီး ဦိးသန်းရွှေ
တောင်ရွာ.မြောက်ရွာ..အလယ်ရွာ = အာစီယံ အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများ
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:37 PM0comments
ရုရှရောက် မျိုးချစ်စစ်သားကောင်းများသို့ 
မင်းတို့ အတွက်၊ ပြည်သူတွေဂုဏ်ယူတယ်။
သားတို့ ရဲ့အဖိုးတန် ဦးဏှောက်တွေမစတေးပါနဲ့ 
တပြည်လုံး ကြိုးစားမှ၊ တိုင်းပြည်ကောင်းစား။
ဒို့ တိုင်းပြည်ကို မဖျက်ခဲ့ပါနဲ့ ။
ရဟန်းဆိုတာ။ တကာတွေအပေါ် ဂရုဏာပိုမှာဘဲ။
အစိုးရဆိုတာ။ ပြည်သူကိုလုံခြုံအောင် ပံ့ပိုးရစမြဲ။
မင်းခလေးတွေ ဆာလောင်ပြီး ငိုယို
သားရော ဘာကို လုပ်မလဲ?
အသည်းနှလုံး။ ခြစားနေတဲ့ လူ
မင်းဆာသလို၊ သူများလည်း ဆာမှာပဲချင့်
ဘယ်လောက် ဆင်းရဲ ဆင်းရဲ
စောင်ကြားပတ် ဦးရွှေရိုး၊ ဒေါ်မိုးကိုကျူနေဆဲ။
ဒိုးသံ မြိုင်မြိုင်။ ကခုန်ပျော်ရွှင်မြဲ
မသဒ္ဓါ ငယ်ဘ၀က ဗမာ..
ခုများလေ။ သော့ခတ် ဘုန်းကြီးကျောင်း။
တွေးကြည့်။ သားတို့ ရေ။
ကိုရင်မယ်တော်။ လာပို့တဲ့ ဆွမ်းတော်ဝတ်
သွေးနဲ့ မဆေးပစ်ခဲ့ကြပါနဲ့ ။
ဗမာပြည်ကခလေးများ၊ ခုံမရှိ စားပွဲမရှိ
လက်နက်ရှိရင် ဘယ်သူမှ.XXX ဂရုမစိ်ုက်..
ဒီလိုသာ ခေါင်းမာမာ၊ ဆက်မိုက်လို့က်။
ဒို့ တိုင်းပြည်ပြိုလဲ။ ပြာပုံဘဲကျန်မယ်။
တိုးတက်ဖို့အခွင့်ကောင်း။
သားမောင်တို့ အနာဂတ်ကို။ ကိုယ်တိုင်မင်းရေး။
သားတို့ တိုင်းပြည်ကို သားတို့ တကယ်ချစ်ကြရင်။
မသဒ္ဓါ ( ၁၁။၂၂။၂၀၀၇)
မသဒ္ဓါ cbox ထဲလာ ဆဲရေးသမျှ။
အမှန်ကိုပဲ။ မျှတစွာ ကျမဆို။။
အားလုံး အဆင်ပြေ မေတ္တာဖြင့် နေထိုင်ရေး
မတတ် တတတ် ကဗျာများရေးထားခဲ့ပါတယ်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:20 AM 1 comments
အာဏာရှင်သို့သတိပေးခြင်း
မတရား။ မဟား ဒယား၊
မင်းတို့ ဆင်းမလား။ မဆင်းဘူးလား၊
ကမ္ဘာပေါ် ဗမာတွေ မျက်နှာငယ်ရနေ။
ဒီမိုကရေစီနဲ့ ၊ လွတ်လပ်ခွင့်တောင်း၊
အာဏာရှင်၊ မင်းတို့ ဘေးဖယ်။
အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲ ဖြိုခွဲ
ဒို့ စိတ်ဓါတ်တွေ မပြိုလဲ
အမေစုရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒို့ အားလုံးရဲ့သွေးထဲမှာ။
မင်းကိုနိူင် ရဲ့ ရဲရင့်ခြင်း၊ ဒို့ စိတ်ဓါတ်အတွင်းထဲမှာ။
ရှင်ဂမ္ဘီရ ရဲ့မေတ္တာတရား၊ ဒို့ နှလုံးသားထဲမှာ။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ တော်လှန်ရေး၊ ဒို့ အတွေးထဲမှာရွေးချယ် ။
၀ နှစ်လုံး ထပ်ပေါ်လျှက်၊
အဓမ္မဆိုတာကို တော်လှန်ဖို့ 
အင်တာနက်ပိတ်ပိတ်၊ ဖုန်းသံ ဘဲတိတ်ဆိတ်၊
မီဒီယာများ ဘယ်လို ပိတ်ပိတ်
ဒို့ မျိုးရိုး စဉ်လိုက်
ဘယ်တော့မှ ဒို့ ပန်းမပေး၊
ပြည်သားကိုရန်စ၊ ဘာသာကို ကြဉ်ပ၊
ဖက်ကလေး နဲ့ ထုပ်ထားကြ။
မရှိတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနုံနဲ့ ယဲ့ယဲ့မွဲ။
မင်းအသုဘမှာ၊ လူလာ နည်းနည်း ။
ကမ္ဘာအနှံ့အာဏာရှင်ရဲ့နိဂုံး
ဘယ်သူမှ ပျော်ရွှင်၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဆုံးမရှိ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 8:04 AM0comments
ချစ်သမီးဖြူသို့..အဖေ့ ၏စာ
ဇာတိ ဇရာ ဗျာဓိ မရဏ.
ကွေးသောလက်တို့ မဆန့် မီ..
မီးဇာကုန် ဆီ ခမ်း…မပြန်လမ်း ကိုသွားကြ
အဖေသွားနှင့်လို့ သမီး အားမငယ်။
အော်..တဖြေးဖြေး ကြီးပြင်း အရွယ်ရောက်
ပြတ်သား ရိုးသား ကြင်နာ
ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုလာဘ်
လူတော် ထူးချွန်ဖို့ အရေး။
လူတော်တိုင်း လူကောင်း မဖြစ်
ဗီဇ ကောင်းသော သစ်တပင်၊
အများချစ်သော အဖေ့သမီး ဖြူ
အဖေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ များ.
သမီး မပြုစုလိုက်ရလို့ များ။
နောင်တပွါး..ကြောင့်ကြ မများနဲ့ ။
ချိနဲ့ သူ နာကျင်သူ။
မသဒ္ဓါ (၁၁။၁၉။၂၀၀၇) ညီမလေးဖြူဖြုသင်းသို့ 
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:17 PM0comments
တိဘက် ဗမာ..မွန် ခမာ.
ပျူ အစ ကမ်းယံ၊.သက် နဲ့ ရခိုင်
တောင်သူ၊ ထားဝယ်၊ ယော။
ခွန်နှစ် မျိုး ရှိသောဗမာ။
ဂျိန်းဖော.ကရင် ရှမ်း ချင်း
မွန် ပအို့ ပလောင်
လားဟူ ပဒေါင် လီဆူး နာဂ
အခါ ရ၀မ် မရူ အဇီး လရှီ
တောင်ရိုး ဓနု လီရှော ၀ ကယား
လူုမျိုးနွယ် ( ၁၃၅ ) တိုင်းရင်းသားများတွေ
ဓလေ့ စာစကား ဘယ်လောက်ကြွဲပား
သွေးသားရင်း ဒို့ အတူတူ။
ဒို့ အတူတကွ မွေးဖွားဖော်
ပြည်နယ်အနှံ့ နယ်ဖြန့် 
သားရင်း ရာဇကုမ္မာကိုတောင် စတေး
ရာဇ၀င်မှာတောင်ရေးခဲ့တာ။ ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေး
တော်လှန်ပစ်လည်း ဒို့ အတူ.
သူဓလေ့ ကိုယ့်ဓလေ့ ပျော်မွေ့ ကြည်နူး
ရေအားထုတ်တဲ့ လောပိတ. ကယားပြည်က
လမ်းခင်းဖို့ ကျောက်စရစ်တောင် ကချင်ပြည် ပြန်မပို့ ။
ဗမာတဲ့ဟေ့ ဒို့ ဗမာ။
လက်တွေ့ မှာကျ..အထင်နဲ့ လွဲ
ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသား၊ တကယ်ဆို ထူးမခြားနား။
ဒို့ ဗမာလူမျိုးများ ထမင်းရည်ရက်
ဗမာမိန်းခလေးများခမျာ သူတို့ ပျော်တော်ဆက်။
အမှန်မှာ ဒါ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်
ဒို့ တိုင်းပြည်လည်း၊ မှုန့် မှုန့် ညက်ညက်ကျေ။
ဒို့ မောင်နှမတွေ ညာ ညာ လာ
ဘာညာ ဘာညာ သွေးခွဲလို့ မရတော့
သူတို့ ဟာ ဘာသာမဲ့ စာနာမဲ့
ဘယ်ဘာသာမဆို ဖျက်ဖို့ အလွယ်လေး..
ဒို့ တတွေ လွတ်လပ်ရေးရ
တိုက်ပြွဲပန်စစို့ လား..သားချင်းတို့ 
ချစ်သော အမိမြေ၏ လွတ်မြောက်ရေးသို့ ။
ရေးကြည့်ထားပါသည်။ မှားယွင်းပါက ကျမ၏ညံ့ဖျင်းမှုသာဖြစ်ပါသည်။ ကျမသည်လူဖြစ်သောကြောင့် တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ချစ်ပါသည်။ လူမဟုတ်သူများကသာ..မုဒိန်းကျင့်တတ်ကြပါကြောင်း
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:31 PM 1 comments
ပဉ္ဇင်းဦးကောဝိဒထံပို့မေတ္တာစာ
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး။ နိုင်ငံ၏ အရေး
မိုးသဲမရှောင်။ တုတ်ရိုက်ပွဲ မရှောင်
ကျည်ဆံမိုးထဲတောင်။ တိုက်ရဲရဲ သေရဲရဲ၊
မေတ္တာရောင်စဉ် ဖြန့် ကြဲ။ လမ်းလျှောက်ပွဲ ၀င်ခဲ့။
ပဉ္ဇင်းရဲ့စေတနာ။ သာဓု အနုမောဓနာ။
တပည့်တော်။ အတိုင်းမသိ ပီတီထောမနာ။
ပဉ္ဇင်း၏ အတူတကွ။ ရဲရင့်ကြသူအများ
သွေးရဲရဲ စွန်းထင်း။ ကျဆုံးခြင်းများ
လူမဆန် နှိပ်စက်။ စစ်ကြောရေးထဲ ၀ိညာဉ်ထွက်သူ
သေလု သေဆဲ သေလတ္တံ
ရဟန်းရှင်လူအပေါင်း၏ ဇာတိသွေး သတ္တိ
တိုင်းပြည်ကို သိခြင်း။ ကဗျည်းတင်ထိုး ထားပေ၊
ဒါ ခေတ်သမိုင်းဆိုး ရဲ့အမွေ။
ငွေနဲ့ ရင်း။ အချိန်နဲ့ ရင်း။ လုပ်အားနဲ့ ရင်း။
ချွေးနဲ့ ရင်း။ မျက်ရည်နဲ့ ရင်း။ ဘ၀ကိုနှင်း။
သွေးနဲ့ ခင်းမှ ရ။ အသက်နှင်းမှ ရ။
အဖမဲ့သားသမီးများ၊ လွမ်းဖျားဆို့ နင့်တမ်းတခဲ့၊
မြေးငယ်ကို မမြင်ဘူးဘ၊ဲ အိမ်မက်ထဲပုံဖေါ်ဆဲ။
နိုင်ငံကို ဘ၀ပေးဆပ် ဖို့ ကလွဲ။
ဘာအခွင့်အရေး နဲ့ မှ မလဲ
အနာဂတ် ယဲ့ယဲ့ နဲ့ မုဆိုးမ
အိမ်ထဲမှာ၁၂ နှစ်ကျော် ဘယ်လိုနေရပါ့။
စာနာ စဉ်းစား ပေးကြည့်ပါဦး။
သန်း၅၀ ကျော် မြန်မာလူထု။ ရင်ဝယ်သားလိုပိုက်စု၊
သူ့ ဘ၀ကို.စတေးလိုက်တဲ့ မိန်းမတဦး..
ကိုယ်တိုင်က ဒီလောက်ပါရမီ မရှိ။
ဘုရားရှင် နှုတ်ကပတ် ထွက်၊
ခုဘဲ ဂျိုထောင်လိုက်။ ခုဘဲ ဂျိုကားသွားလိုက်။
လူ့ ပါးစပ်ဖျား။ အပြစ်များဘယ်ခါ မလွတ်။
သွားစရာ့ကိုယ့် လမ်းသာ ဆက်လျှောက်
သမိုင်းဆိုတာ၊ အချိန်တန်ရင် ဘယ်မညာ
အမှန်ဟာ ဗူးပေါ်တာဘဲ။ တနေ့ မှာ။
ဒေါ်စုနဲ့ နအဖ ဆုံတွေ့ မဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ.
ဒါဟာ နိုင်ငံရေး စစ်တုရင်ပွဲ
ပရိယာယ် ပင့်ကူ ကွန်ယက်ဆင်
အလဲထိုး အောင်ဆု လုနေဆဲ
နအဖ မြွေ ခြေမြင်ဘူးထား
ဒီပညာတွေ သူ ဆည်းပူးပြီးသား
စိတ်မပူအား ပါလေနဲ့ ။
ဒီအချိန် ဒို့ အားလုံး
အုပ်စုကွဲ နွားသားအုပ်။ ကျားအခုပ်ခံရနိုင်၊
အရေးမကြုံခင် အပြင်သို့ မထုတ်
ဒီ ကျားကို..အပြုတ်ရှင်းထုတ်ကြဖို့ 
ဒို့ နွားများ သွေးစည်းကြပါစို့ ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 5:02 AM0comments
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:30 AM0comments
အချိန်တန်လို့ ၊ လာတံခါးခေါက်..
လူ့ အခွင့်အရေး၊ ဘယ်လောက်ထိဖေါက်
ဒို့ ဘယ်လို လိမ်ရကောင်းမလဲ
ညာ ညာ သေအောင်ညာ၊
အစာမ၀ တ၀၊ ထောင်သားများအား
ဒို့ မကျွေးနိူင်လို့ ပိန်နေတယ်။
အနံ့ အသက် မရ ရအောင်။
ညစ်ပတ်ထောင်တွင်း။ တသက်မရှင်းတဲ့ အရှုပ်၊
ထောင်နံရံတွေဆေးသုတ်။ လှတပတ လုပ်
အ်ိမ်၌မွေးထား၊ ခွေးများတောင်မကျန်စေနဲ့ 
ဦးဂမ္ဘီရ ရဲ့အမျိုး၊ အရိုးတောင်မချန်ချင်
ဘယ် UN ဘဲလာလာ
ဖမ်းနေတာ ဒို့ မလျှော့
ဒို့ များက စွမ်းမှစွမ်း..
မဲလှအသား. အလုပ်မများလို့ ဖြူသွား..
သူတို့ ထင်တယ်..ဒို့ပိရိ
ထောင်ထဲမှာ TV မှန်မှန်ပြ၊
bus ကားတိုးစီးဖို့ မလို၊
ဒီ ၈၈၈၈ ကျောင်းသားများ
အပြင်မှာ သူတို့ ရန်များ
ချစ်လို့ သာခေါ် ဒို့ စောင့်ရှောက်
UN မှာ သက်သေခံ ဓါတ်ပုံတွေရှိ။
ကဲ လိမ်ရဲရင် လိမ်ကြည့်စမ်း။
ဟယ် လက်ရှောင်လို့ ဖယ်စမ်း။
အာဏာရှင်လူသရမ်း၊ နောက်မှ လာမလွမ်းနဲ့ ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:08 AM0comments
ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်မြေ၊ ကိုယ့်တိုင်း ကိုယ့်ပြေ၊
ကိုယ့်နွားက ပိုလှ၊ ကိုယ့်အစားမှ အရသာရှိလှ၊
ကိုယ့်ဘာသာမှ မှန်သပါ့၊ ကိုယ့်စကားပြောမှ အားရ၊
နိဗ္ဗါန်တောင်ပင်၊ ဖွဲနဲ့ ဆန်ကွဲ
ရောင့်ရဲမှု ပါရမီ၊ ရှိကြ ဒီလူမျိုး
ကိုယ့်မြေတလက်မ၊ ရန်မစနဲ့ 
သူ့ ကျွန်မလုပ်၊ ဒူးမညွတ်ဘူး
အသားထဲက လောက်၊ထိုးဖောက် ရိစား
ပဲ့ရွဲ့ နေတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ၀ံသာနု ဆိုတာ ဘာမသိ
လူမျိုးမရှိ ဘာသာမရှိ်။ ငါ့ တဘို့ ဘဲကြည့်
တရား စည်ကျိုး၊ စစ်သူခိုးမျိုး
တိုးပွါး အစွမ်းထက်၊ ခိုးဆိုး လုယက်
မြို့ ရွာတွေဖျက်၊ လယ်ကွက်တွေသိမ်း
အမျိုးတိမ်းအောင်၊ မုဒိန်း နဲ့ ဖျက်
အလယ်လူခိုးတာ ပြည်သူ့ ဥစ္စာ
အော်..တစတစ၊ နေလို့ မရ
ပြေး ပြေး...ဝေး ဝေး..
နေမရအောင် နှင်တဲ့လူများ၊ ကမ်းကုန် ရက်စက်အား
ခုလေ..ကမ္ဘာပေါ်တလွှား၊ ဗမာ့စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များပြား
မသဒ္ဓါ (၁၁။ ၁၃။ ၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:26 PM0comments
ဖွားဖွားသဒ္ဓါ ဒါးမတိုသွေး၊ တော်လှန်ရေးသို့ ပြင်
သာဓု.. သာဓု.. သာဓု..ထောပနာပြု
မသဒ္ဓွါ (၁၁။၁၂။၂၀၀ရ) ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်အဖိုးအဖွားများ.ကျမတို့ လက်ထက်ညံ့၍ .ရင်မကျိုးသွားစေရန်..အကျိုးမျှော်၍...နှိုးဆော်လိုက်ပါကြောင်း ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:20 AM0comments
ကိုယ်ကျိုးစွန့် ..နောက်မတွန့် 
မသဒ္ဓါ (၁၁။၁၁။၂၀၀၇) ညီမလေးဖြူဖြူသင်းအတွက်..မဆုံ..မတွေ့မသိဘူးသော်လည်း အာဇာနည်မျိုးသေရိုး မရှိပါ။ မမမှ..ဂုဏ်ယူပါသည်။ အတိုင်းထက်အလွန်ပါ။
ကုလားကျမင်းတဲ့ ..အိုဘဲ့ နရသူ..
ဟင်းစား ၅၀၀ မရှိ..မျက်ရည်ယိုသည့်
MTV မှာဒါတွေ ရေပန်းစား
သမာသမတ် ပြည်သူ့ ဘက်ရပ်..
မြန့် သမိုင်းမှ.. အမည်သစ်ရ
မသဒ္ဓါ ( ၁၁။၁၁။၂၀၀ရ)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:13 AM 1 comments
မင်းတို့ ဟာ..ဒို့ တွေရဲ့ဆွေမျိုးတော်ချင်တော်မယ်
မင်းတို့ ဟာ..ဒို့ သိတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်.
အာဇာနည်ကောင်း..ဘယ်တော့မှ မင်းတို့ ဂုဏ်မငယ်..
မသဒ္ဓါ (၁၁။၁၀။၂၀၀၇) ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင်..ကျဆုံးခဲ့ရသော..၇ဟန်းရှင်လူ..ကျောင်းသားပြည်သူ.သူရဲကောင်းများအတွက်..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:32 PM0comments
အမှောင်ကိုခွင်း ရဲရင့် ခြင်း..ယုံကြည်ခြင်းအတွက်
အမကြီး..အမိအရာ နဲ့ မသဒ္ဓါ။
နိုးကြားညီညာ..ဒို့ မြေသာဖို့ 
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:31 AM 1 comments
လေပွေထဲလွင့်စင်သော လဲမှို့ ပွင့်ကလေးများ..
အများထိုင်စရာ. ဖုံမွေ့ ယာကမ္ဗလာဖြစ်စေရာ
ကြွေခဲ့ပြီ..ကြွေနေဆဲ…ကြွေလတ္တံ့ သော..လဲမှို့ ပေါက်များစွာ…
ဦးမောင်ကို (ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများသမဂ္ဂရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး). ၁၉၉၀.နိုဝင်ဘာလ (၇)ရက်တွင်ကျဆုံးခဲ့သည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 11:00 PM0comments
ကြခတ်ဝိုင်းငွေရှင်းတမ်းသို့ရာဇ၀င်ကြွေး ချေပခြင်း။
ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့ သိခဲ့ကြ။
မြို့တံခါးဝ က. ပုတ်သင်.
ကိုယ်တော် ဒီလောက် ငွေလေးများ..
ဒီငွေလောက်နဲ့ ..လူသတ်စေဖို့ အခါပေး
ဒါဟာ ပါပါဇိက ကံတော်ခသိက္ခာကျခဲ့ပြီ
ပြည်သူလှူမှာ.. ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန သပိတ်ကံဆောင်ပြု
စစ်မှန်သော သံဃာထု. . . ရဲရင့်သော..သံဃာထု
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 5:35 AM0comments
ကျနော်ပါဘဲ.. င XXX
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:42 AM0comments
ကြွ..ဆွမ်းတော်ဗျို့ ..လောင်းကြဖို့ 
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:01 PM0comments
မိုးဝဿန်လွန်.. ဟေမာန်ကျွံ့ လ
ကြိုးစားစို့ လား..ဒို့မနား..
အောင်ပွဲဆီသို့ ..ဆက်လျောက်စို့ 
မသဒ္ဓါ (၁၁။ ၃။၂၀၀ရ) ..မောင်လေးဆောင်းယွန်းလအတွက်
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:47 AM0comments
ဖက်ဆစ်ယုတ်သည် .. လက်နက်အားပြ
ဒို့ ပြည်သာဖို့ ..ဒို့ မြေယာတို့ 
မကြောက်မရွံ့ ..နောက်ဆုတ်မတွန့် 
လာ.. ပြိုင်တူတွန်းလျှင်….ဒို့ ရွှေ့နိုင်။
အနုရုဒ္ဓာ၏ မြတ်သစ္စာ..ဘဘအတွက် ပုဂံကျိန်စာ.
ပိဋ္ဋိကတ်သုံးပုံအစုစုမှ..ပြန့် ပွါးလာတဲ့ မြတ်သာသနာ
ပုဂံ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၉၀၀ ကျော်..
ညညလန့် နိုး..ချောက်လှန့် ကြစေ.သရဲတစ္ဆေ
ဂင်္ဂါ.သဲနုကဲ့သို ပွင့်ခဲ့ရ့ မြတ်စွာဘုရားအဆူဆူ.
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:57 PM0comments
ဒါးမြကြီးနဲ့သူခိုးလက်ခံ ရွာများ. ( စစ်အာဏာရှင်နဲ...